Xukuumada Soomaaliya oo go?aan adag oo deg deg ah ka qaadanaysa dadka ku jira guryaha dowladda – Radio Daljir
Xukuumada Soomaaliya oo go?aan adag oo deg deg ah ka qaadanaysa dadka ku jira guryaha dowladda
Seteembar 6, 2013 2:27 b 0
Muqdisho, September 6, 2013 – Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa shaacisay, in ay go?aan adag oo deg deg ah ka qaadan doonto dadka ku jira guryaha dowladda ee ku yaala Muqdisho, weliba waxay dowladdu si aad ah uga hadashay dadka kireeya guryaha dowladda.
Wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya Cabdulaahi Ciilmooge Xirsi oo warbaahinta gudaha la hadlay, waxaa uu sheegay in ay jiraan dad hoy ka dhigtay guryaha dowladda ee Muqdisho, kuwaas oo haddana guryaha ka sii kireeya dad kale si ay lacag gunno ah uga helaan.
Mudane Ciilmooge wuxuu sheegay in maalinta Axada ah ay gollaha xukuumadu ka shiri doonaan qorshaha dowladda uga degsan soo celinta hantidii dowladda ee magaalada Muqdisho, wuxuu sharci daro ku tilmaamay in shacabka laga kireeyo hantida dowladda.
? Kulanka Axada, waxaa looga hadli doonaa arintaas, dowladda waxaa ka go?an in ay guryaheeda dib ula laabato, basle goobaha ay degan yihiin dadka shacabka ah ee aan haatan loo baahnayn waxaa loo dejin doonaan siyaasad cad? ayuu yiri Ciilmooge.
Magaalada Muqdisho dhowaan waxaa laga dareemay Olole ay dowladda Soomaaliya dadka kaga saarayso dhulkeeda ay shacabku degan yihiin, balse war ka soo baxay Madaxtooyada Soomaaliya oo uu ku saxiixnaa Madaxweyne Xasan sheikh ayaa lagu sheegay in dowladdu ay ka laabatay go?aankaas uuna ?ahaa mid khaldan.
Al-shabaab iyo dowladda oo ku dagaalamay Aaga degmada Bardaale ee gobolka Baay (Dhegeyso)
UN-ka oo dayactir iyo daryeel caafimaad la gaari doona xabsiyada gobolka Hiiraan iyo maxaabiista